လေးလံသောသံမဏိ Safes အပြည့်အဝ Safe Safe Super Secret Secret MP-670 ကိုအသုံးပြုပါ
Weierxin Safe Product မှ Double Double Double Double Doon-800 ဖြင့်သံမဏိလုံခြုံမှုအကွက်အပြည့်အဝအလုပ်
LCD Display LS-800-D နှင့်အတူ SAFE SAFE Box Electronic Lock
မြေတပြင်လုံးကိုနေအိမ်ကို Safe Box ကို MS-600-ထံမှ Weierxin Safe စက်ရုံ
* အရွယ်အစား: H670 * W440 * D390mm
* Lock: ဖန်သားပြင်ဖြင့်အီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်
* အထူ: တံခါး - 10 မီလီမီတာ, ခန္ဓာကိုယ် -4mm
* 10 မီလီမီတာအစိုင်အခဲသံမဏိ bolt
* MP-320 မှ လွဲ. ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသောကက်ဘိနက်ငယ်လေး& MP-400
* 4pcs AA ဘက်ထရီ
item no ။ ပြင်ပအရွယ်အစား (MM) နေရာချထားခြင်း ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (MM) n.w.
ဆုတောင်းပါ အလိုတော် ှုွမည်သောင စင် အဈန့် ဆုတောင်းပါ အလိုတော် ှုွမည်သောင ကီလိုဂရမ်
MP-320 320 380 31 1 ပေ0330 430 385 32
MP-400 400 380 31 1 ပေ0410 430 385 38
TMP-800 နှစ်တံခါး 800 460 410 1 ပေ0810 510 480 91
ပေ01
MP-1500 1500 630 530 သုံး 1 1510 680 600 218
ဤသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လေးလံသောသံမဏိလုံခြုံသောသေတ္တာ MP-670 ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အိမ်, ရုံးနှင့်ဘဏ်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်း၏ခန္ဓာကိုယ်သည်မီးခိုးရောင်၌ရှိပြီးတံခါးသည်အပြာရောင်၌ရှိသည်။
ထိပ်မှာကက်ဘိနက်သေးသေးလေးတစ်ခုရှိတယ်။ box ထဲမှာတ ဦး တည်းချိန်ညှိစင်တစ်ခု။
သုံး side10mm အထူထူ startness သံမဏိ bolt ။ တံခါး၏နောက်ကျောတွင်စကားဝှက်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့အနီရောင်ခလုတ်။ 4pcs AA ဘက်ထရီ။
မှန်ကန်သောစကားဝှက်နှင့်အဓိက key ကိုထည့်ခြင်းဖြင့် Safe ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ အရေးပေါ်သော့နှင့်အဓိက key ဖြင့်လည်းသင်ဖွင့်နိုင်သည်။
* ပစ္စည်း: သံမဏိ* အရွယ်အစား: H800 * W460 * D410mm* Lock: မျက်နှာပြင်နှင့်အတူအီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်* အထူ - တံခါး - 10 မီလီမီတာ, ခန္ဓာကိုယ် -4mm* 10 မီလီမီတာအစိုင်အခဲသံမဏိ boltတံခါးနှစ်ပေါက်* box ကို box ကို * သေးငယ်တဲ့ကက်ဘိနက် int* ထိပ်အကွက်ထဲတွင်ချိန်ညှိစင်ကမ်းခြေရှိစင်ပေါ်စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်အနီရောင်ခလုတ်* 8PCS AA ဘက်ထရီ
* ပစ္စည်း: သံမဏိ* အရွယ်အစား: H800 * W475 * D430mm* Lock: မျက်နှာပြင်နှင့်အတူအီလက်ထရောနစ်ဒီဂျစ်တယ်သော့ခတ်* အထူ - တံခါး - 10 မီလီမီတာ, ခန္ဓာကိုယ် -4mm* 30mm အစိုင်အခဲသံမဏိ bolt* အတွင်းပိုင်းချိန်ညှိဖန်ထည်စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်အနီရောင်ခလုတ်* 4PCS AA ဘက်ထရီ
* ပစ္စည်း: သံမဏိ* Size: H600 * W400 * D300MM* အထူ: တံခါးကို-4mm, ခန္ဓာကိုယ်-1.5mm* Lock ကို: လက်ဗွေ* လက်ဗွေစွမ်းရည်: 29* 10 မီလီမီတာအစိုင်အခဲသံမဏိမူလီထိပ်ပေါ်မှာ * Lockable သေတ္တာ* Adjustments ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းအတွင်း၌စကားဝှက်ကိုထပ်မံစိစစ်တည်းဖြတ်များအတွက် * အနီရောင်ခလုတ်ကို* 4pcs AAA ဘက်ထရီ